घरबाट खाना खाएर निस्किएका २ बालकको घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव फेला ! – नेपाली संगसार
घरबाट खाना खाएर निस्किएका २ बालकको घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव फेला !
नेपाली संगसार calendar_today ७ जेष्ठ २०७८, 7:37 am
बारा । बाराको कलैयामा दुईजना बालकको घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ । मंगलबार बिहान कलैया उपमहानगरपालिका-७ रंगपुरस्थित बन्दै गरेको मदरसाको एक कोठामा दुई जना बालकको शव फेला परेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले सोमबार बेलुका ७ बजे घरबाट निस्किएर बेपत्ता रहेकका उनीहरु बिहान घाँटी रेटिएको अवस्थामा मृतफेला परेको जानकारी दिए ।
यस्तो अवस्थामा उसमान र अमिनको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता (डिएसपी) गौतम मिश्रले बताए । मृतक दुवैजना स्थानीय गफार मियाँका छोरा हुन् । सोमबार साँझ ८ बजे घरबाट खेल्न गएका उनीहरु घर फर्केका थिएनन् । स्थानीयले आज बिहान शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
मृतक बालकहरु सोही स्थान बस्ने ९ वर्षीय उस्मान अन्सारी र ७ वर्षीय अमान अन्सारी हुन् । अहिले घटनास्थललाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भैरहेको उनले जानकारी दिए ।